Mbola lavitra ny lalana… tan-dalàna | NewsMada
Mbola lavitra ny lalana… tan-dalàna
Resabe ny amin’ny famonoan’ny polisy an-kitsirano ny olon-dratsy hita fa tsy afa-nihetsika teny Ampefiloha, ny 23 aogositra lasa teo. Fanamparam-pahefana, tsy firaharahana lalàna, tsy fanajana zon’olombelona… Soa ihany, efa nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra: any am-ponja ny nahavanon-doza. Haingana be ny fitsarana?
Ny mahavalalanina sy mahafanina, efa andro vitsivitsy aty aoriana vao tapa-kevitra ampihatra lalàna. Nahoana? Nisy ny famakiana bantsilana tamin’ny tambajotran-tserasera. Tao aza ny nilaza fa narahin’ny tenin’ny masoivoho vahiny iray izany. Raha tsy izay, ho vitavita sy tsy hitahita ho azy eny ny raharaha… tsy takona afenina?
Amin’izany, ahoana ny amin’ireo nahita ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanao? Na tsy nisy sahy namaky betroka ny marina sa niray tsikombakomba ihany fa hoe mpiray asa… Mila mamoaka ny zava-misy marina ny vahoaka ifotony. Tsy ilaozan’izay manaotao foana tsinona. Tsy mety ho diso? Na lehibe tsy meloka…
Tsy vitan’izay, mbola eo ny fahazaran-dratsin’ny sasany hanafina ny marina na mihevitra ny vahoaka ho bado. Rehefa ny tsy azo anoarana vao mikoropaka amin’itsy sy iroa. Avadika ho hery sy fahamboniana aza ny fanitsiana ny fahavoazana. Nefa saika vitavita sy tsy hitahita ho azy raha tsy nisy namaky bantsilana… tsy azo nafenina.
Miara-dalana amin’izany, tsy mbola tena maharesy lahatra sy iainana ny hoe tan-dalàna. Mbola tahotra fitsarana sy fonja no anaovana ny marina? Na ny fanajana zon’olombelona, na fanajana lalàna… Fanahiana fahafaham-baraka ny fampiharan-dalàna? Rehefa tsy misy mahita na miteny, odian-tsy hita sy tsy tenenina fa afenina aza.
Mbola lavitra ny lalana amin’ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna? Tsy tena maharesy lahatra sy iainana, fa ao anaty tahotra sy fiarovan-tena tsy ho afa-baraka. Ny tahotra no voaloham-pahendrena? Mbola lavitra koa ny hoe fangaraharana amin’izay atao, ny fijoroana amin’ny marina… Mila fiovana sy fanovana. Mandra-pahoviana?